Izolo, ngibe nenjabulo yokwenza i-workshop nesifunda Inhlangano Yesipikha Yavelonkhe, eholwa ngu UKarl Ahlrichs. Ngezikhulumi zomphakathi, kubalulekile ukuba khona kwewebhu okuhle futhi iningi lababekhona limangale ukuthola izikhala ezinkulu kumasu abo.
Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe - kuyahlekisa ngama-ejensi ukuthi aphinde abambe amaklayenti abo abathumbe ukuthola izibuyekezo nokuhlelwa lapho kunezinhlelo eziningi zokuphatha okuqukethwe ezithandekayo. Izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe zikuvumela ukuthi ungeze futhi uhlele isiza sakho njengoba ufisa, lapho ufisa. I-ejensi yakho kufanele ikwazi ukusebenzisa umklamo wakho cishe kunoma iyiphi injini yethinging yokuphatha okuqukethwe.
Ukusebenza Kwamaselula - Isayithi lakho kufanele libukeke lilihle kuselula. Kulula ukwenza i-CSS yeselula (ishidi lesitayela) elenza izivakashi zeselula ukuthi zibhekabheke isayithi lakho, zithole indawo yakho, noma chofoza isixhumanisi sokwenza ucingo lwefoni.
Amanye ama-ejensi angahlehlela emuva ekwenzeni wonke lo msebenzi kokubili nangaphandle kwesiza… anginandaba. Cishe sekuyisikhathi lapho bekhuphuka khona namakhasimende abo futhi baqonda ukuthi ukumane ucindezele iwebhusayithi enhle akwanele. Kulezi zinsuku, isu lakho lidinga ukwedlula isiza sakho futhi lifaka imithombo yezokuxhumana, ukwenza kahle izinjini zokusesha, namasu wokumaketha angenayo.